ငါ့ခွေးကလေးနေမကောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
အကယ်၍ သင်သည်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားလိုက်ပြီဆိုလျှင်၎င်းအားမကောင်းမှုအားလုံးမှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သော်လည်း furry တွင်ခိုင်မာသောကာကွယ်ရေးစနစ်ရှိရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
ဘာတွေလဲ အောက်မှာသင့်ကိုရှင်းပြပါ့မယ် ငါ့ခွေးကလေးနေမကောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ.
ခွေးကလေး သင်၏ပထမဆုံးမွေးနေ့မတိုင်မီသင်၏ကာကွယ်ဆေးအားလုံးကိုလက်ခံရရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကိုသင်မွေးစားလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကိုသင်နှင်းမကျစေရန်ветеринарияသို့ယူဆောင်သွားပြီး ၁၅ ရက်ကြာသော်ကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားစတင်သည်။ ကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲ။
ကာကွယ်ဆေးများသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ“ သူရဲ” များကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သောပodိပစ္စည်းများကိုစတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အိပ်ပျော်နေသောဗိုင်းရပ်စ်များဖြစ်ပြီးရန်သူအားထပ်မံပေါ်လာသည့်အခါရန်သူအားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင်၌အချက်အလက်များပိုရှိသည် ဒီမှာ.
အကယ်စင်စစ်သင်သည် "ငါတို့စားသောအရာဖြစ်ကြ၏။ " သင်ဖတ်ဖူးနှင့် / သို့မဟုတ်ကြားဖူးတယ် ကောင်းပြီ, ဒီလည်းခွေးသက်ဆိုင်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာကိုအမြဲစားလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာဖျားနာဖို့အခွင့်အလမ်းအလွန်များတယ်၊ မှားယွင်းသောအစာကိုကျွေးမွေးသောခွေးသည်လည်းသူ၏အားနည်းသောကျန်းမာရေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်.
ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိရှောင်ရှားရန် သူတို့ကို Barf Diet၊ Yum Diet ဒါမှမဟုတ် Summum Diet ပေးဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။အိမ်လုပ်အစားအစာများဖြစ်သော တိရိစ္ဆာန်များမှပရိုတင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစီရီရယ်များမပါ ၀ င်သောအစာ (croquettes) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Acana, Orijen, လက်ခုပ်သံများ, တောရိုင်း၏အရသာစသည်တို့ကို သူတို့ဟာစျေးကြီးတယ်။ (ကီလိုဂရမ်က ၃-၆ ယူရိုပဲထွက်တယ်)၊ ဒါပေမဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့အတွက်ငွေပမာဏအနည်းငယ်ပေးရတာကြောင့်အမြတ်အစွန်းပဲ။ ဒါ့အပြင်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်များအတွက်မဟုတ်ဘဲအစားအစာအတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းတာဟာအမြဲတမ်းပိုကောင်းတယ်မထင်ဘူးလား။ 🙂
ခွေးတစ်ကောင်သည်သိသာထင်ရှားသော်လည်းဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ရေ၊ အစားအစာနဲ့နွေးထွေးတဲ့နေရာတစ်ခုအကြောင်းပြောရုံသာမကလမ်းလျှောက်တာလည်းပါတာပေါ့။ လေ့ကျင့်ရေးယင်းမှ လူမှုရေး အခြားခွေးများနှင့်လူများနှင့်အတူကစားရန်နှင့်အားလုံးအထက်ချစ်ခင်ရန်။ အိမ်အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်ကောင်းစွာဂရုမစိုက်သည့်တိရစ္ဆာန်သည်လျင်မြန်စွာဖျားနာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ငါ့ခွေးကလေးနေမကောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။